Xalka fatahaada Baladweyne (Qormo) – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Xalka fatahaada Baladweyne (Qormo)
By Maxamed Cabdi Baadil on 05/01/2020 No Comment
Janaayo-5-2020(HNN)- Qormadayda caawa waxa ay ku saleysantahay inaan wax uun ka iraahdo fataahadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyo magaalad Baladweyne iyo hareeraheeda.
Qasaaraha nafeed iyo midka hantiyeed ay had iyo jeer sababto fatahaada uu sameeyo wabiga ma ahan mid indhaha laga daboolan karo ama dib loo dhigan karo. Marka ay dhibta fatahaada timaado bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan sida ( Aqoonyahanka, bulshada rayidka, duubabka, dhaqanka iyo siyaasiyiinta) waxaan si wada jir ah uga damqanaa daruufaha soo food saaro dadka iyo deegaanka baladweyne. Waa ku mahadsanyihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed sida ay sanadkaan ugu gurmadeen walaalahood reer Baladweyne Allaha u abaal gudo.
Hadaba si looga baaqsado dhibaatadan waxaa bulshada soomaaliyeed looga baahanyahay in bulshada reer Baladweyne lagu garab istaago sidii looga hortagi lahaa xalne loogu heli lahaa fatahaada ka hor inta aysan dhibaateynin dadka, duunyada iyo deegaanka.
Dhibaatada fatahaada wabiyada waa mid wadamada caalamka inta badan ka gudbay balse dhibteeda ay la soo kulmeen halka wadamada qaar ay la tacaalayaan.
Wadamada ka gudbay oo idil xeeladaha ay adeegsadeen waa biyo xireeno iyo habab kale oo looga baaqsan karo in wabi uu fatahaad sameeyo.
Hadii aan si gaar ah u bidhaamiyo fakarkeyga ku saabsan tallaabooyinka fatahaadaha Baladweyne looga hortagi karo. Waxaan ku soo koobi lahaa labo mid uun.
1. In Biyo xireen weyn la dhiso iyo
2. In wabiga iyo kanaaladiisa la qodo lana ballaariyo.
Hadii aan mid waliba sharraxaad kooban ka bixiyo:
1. Dhismaha Biyo xireen:
In biyo xireen la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo fatahaada wabiga shabeelle ee Baladweyne.
Shaqada dhismaha Biyo xireen weyn ma ahan wax sahlan mana ahan wax si fudud lagu gaari karo. waxaa loo baahanyahay qorshe ballaaran, xirfad, qalab iyo dhaqaale.
Hadii aan qorshaha ku hormaro waxaa loo baahanyahay sahan waafi ah oo ximbaarsan xog dhameytiran sida in la ogaado tirada biyaha la rabo in lagu nafiso biyo xireenka, goobta uu ku haboonyahay, cabirka dhulka ee goobtaas, nuuca ciida, nuuca biyo xireen ee ku haboon, naqshadda biyo xireenka, qalabka dhismaha oo dhameystiran (materials and equipment), shaqaalaha iyo qiimeynti qarashaadka oo dhameystiran kadibne loo helo qarashaadkaas si loo fuliyo. Hadii hayad caalami ah ama wadan ay noqoto inuu na kaalmeeyo waxaa nalaka rabaa qorshahaas dhameystiran waana sababta ugu badan ee looga faa’ideysan waayay mashruucii dowlada Talyaaniga.
Hadaba in la helo xog dhameystiran ma ahan wax sahlan waxeyna u baahantahay sahan waafi ah kaas oo qaadan karo waqti badan, tamar iyo dhaqaale.
Si kastaba shaqadaan waxaa fulin karo sharikad dhisme oo leh awooda shaqada aan xusay ha noqoto mid caalami ah ama mid gudaha ah.
Waxaana wax kasta ka horeeyo in la heli karo ilo dhaqaale. Dhaqaalaha ku bixi karo waa mid aad u badan dhihi maayo ma karno. laakiin hadii la hiigsado waa la kari karaa.
2. Qodida iyo Ballaarinta wabiga iyo kanaaladiisa:
Qodida iyo Balaarinta wabiga waxey sidoo kale xal u noqon karaan fatahaada wabiga waana mid qudheeda u baahan qorshe buuxo. Halka ay tahay in wabiga laga ballaariyo lagana qodo, labada kanaal in la carro bixiyo lana jiheeyo, waane mid ka sahlan qodobkii koowaad. Si kastaba iyaduna waxaa ay u baahantahay sahan kadibne qorshe iyo dhaqaale. Habkaan labaad waa midka sida degdeg ah loo sameyn karo dhaqaale ahaane ah mid jaban kolka la barbar dhigo kan hore balse looma qaadan karo mid sahlan oo waa mid shaqo adag iyo dhaqaale u baahan.
Waxaana qorsheyntiisa ay la qaab tahay kii hore haba ka sahlanaatee.
Habkaan dhowrkii sanaba waxaa loo baahan doonaa dayactir sida in wabiga la qashin bixiyo, kanaaladan la carro bixiyo tusaale ahaan 4tii sano mar.
Ugu danbeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ruux kasta oo dadaal ugu jiro sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka fatahaada Baladweyne.
Gudiga gurmadka ee reer Baladweyne Allaha ka abaal mariyo caawintii iyo kaalmadii ay u fidiyeen bulshadooda iyo sida haddaba ay ugu taaganyihiin xal u helid fatahaada iyo dhismaha biyo xireenka.
W/Q Ahmed Baasaay.
Xalka fatahaada Baladweyne (Qormo) added by Maxamed Cabdi Baadil on 05/01/2020
View all posts by Maxamed Cabdi Baadil →